Samsung Gear Sport dia efa amidy any Espana | Androidsis
anefa Xiaomi sy Apple no mpitarika ny tsena, Samsung koa dia iray amin'ireo orinasa malaza indrindra amin'ny tsenan'ny entina entina. Nanangana famantaranandro ara-panatanjahantena marobe ny tsena iraisam-pirenena Koreana hatreto. Izao ny smartwatch farany anao, ny Samsung Gear Sport, mahatratra ny tsena espaniola ihany koa.
Momba izany famantaranandro fanatanjahan-tena an'ny orinasa Mandrak'izao. Sady amin'ny endriny no miavaka. Hita ho a fivoaran'ny Gear Sport S3. Na dia manolotra andiam-panatsarana maromaro aza izay ahitan'ny maro azy ho iray amin'ireo fiambenana ara-panatanjahantena tsara indrindra navoaka tamin'ity taona ity. Holazainay aminao bebe kokoa etsy ambany!
Voalohany indrindra dia mila asongadino ny famolavolana lehibe ananan'ity Samsung Gear Sport ity. Koa satria tsy misy fisalasalana, dia asa lehibe izay notanterahin'ilay orinasa tamin'io lafiny io. Ho fanampin'izany, manolotra mifanentana tanteraka amin'ny smartphone. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny iPhone, na dia amin'ity tranga ity aza dia mety tsy mandeha ny lahasa sasany. Saingy, amin'ny ankapobeny dia azo atao ihany koa ny mampiasa azy amin'ny telefaona Apple.
Avelanay eto ambany ianao miaraka amin'ny pitsony feno amin'ity Samsung Gear Sport ity:
efijery: SuperAMOLED boribory 1.2-inch misy famahana 360 × 360 (302ppi)
Fiarovana amin'ny efijeryCorning Gorilla Glass 3 miaraka amin'ny fanoherana MIL-STD-5 ambaratonga 810 ATM fanoherana
processeur: 1 GHz fototra roa
Fahatsiarovana anaty: 4 GB
Conectividad: Bluetooth 4.1, Wi-Fi b / g / n, NFC ary GPS / GLONASS / Beidou
bateria: 300 mAh (famandrihana tsy misy tariby)
habe: 42,9 x 44.6 x 11.6 mm
lanja: 50 grama (tsy misy haba)
Sela Mpandray Hafanana: Accelerometra, gyroscope, barometre, tahan'ny fo ary hazavana manodidina
mifanentana: Samsung Galaxy misy Android 4.3 na avo kokoa, fitaovana Android misy Android 4.4 na avo kokoa ary iPhone 5, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus miaraka amin'ny iOS 9.0 na avo kokoa.
loko: Manga manga sy metaly
Noho izany dia hitantsika fa a fiambenana tsara hijerena ny hetsika ara-panatanjahantsika. Samsung Gear Sport dia afaka mifehy ny fanatanjahan-tena ho azy amin'ny alàlan'ny fikarohana ireo dingana, hazakazaka na rehefa mitaingina bisikileta ianao. Ho fanampin'izany, manara-maso tsy tapaka ny pulsa izy ary afaka mirakitra ny toerana sy ny fitempon'ny fo mandritra ny fanatanjahan-tena.
Tsy misy isalasalana, safidy iray tena feno amin'ny tsenan'ny fiambenana fanatanjahan-tena. Samsung Gear Sport dia misy amin'ny tsena Espaniôla izao. Hita ao amin'ny magazay Samsung ofisialy amin'ny vidiny 353 euros. Ahoana ny hevitrao momba ity fiambenana ara-panatanjahantena ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny famantaranandro Samsung Gear Sport dia misy any Espana izao